Ministry of Information | Oct 29, 2019
(အောက်တိုဘာလ ၂၉ ရက်၊ ကမ္ဘာ့လေဖြတ်ရောဂါကာကွယ်ရေးနေ့ အထိမ်းအမှတ်)
(World Stroke Day)
ကမ္ဘာ့လေဖြတ်ရောဂါကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ (World Stroke Organization) က အောက်တိုဘာလ ၂၉ ရက် နေ့ကို ကမ္ဘာ့လေဖြတ် ရောဂါကာကွယ်ရေးနေ့အဖြစ် သတ်မှတ်ထားပါသည်။ လေဖြတ်ရောဂါကာကွယ်၊ ကုသခြင်း၊ လေဖြတ်ပြီး ပြန်လည်ထူထောင် လေ့ကျင့်ခြင်းတို့နှင့်သက်ဆိုင်သော ဆောင်ပုဒ်များကို နှစ်စဉ် သတ်မှတ်ကာ လူထုပညာပေး လှုပ်ရှားမှုများကို ကမ္ဘာ့နိုင်ငံ အသီးသီး၌အောက်တိုဘာလ ၂၉ ရက်နေ့တွင် ပြုလုပ် လေ့ရှိပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင်လည်း လေဖြတ်ရောဂါနှင့်ပတ်သက်၍ လူအများ ပိုမိုသတိပြု မိလာစေရန် ရည်ရွယ်၍ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစား ဝန်ကြီးဌာနနှင့် မြန်မာနိုင်ငံဆရာဝန်အသင်း၊ ဦးနှောက်နှင့် အာရုံကြော ဆေးပညာအဖွဲ့က ကြီးမှူးပြီး ကမ္ဘာ့လေဖြတ်ရောဂါကာကွယ်ရေးနေ့ အခမ်းအနားများ နှစ်စဉ် ကျင်းပကာ လူထုပညာပေးလုပ်ငန်း များကို ၂၀၀၉ ခုနှစ်မှစ၍ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
ယခုနှစ် လေဖြတ်ရောဂါကာကွယ်ရေးအထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနားကို အောက်တိုဘာလ ၁၉ ရက်နေ့တွင် ရှမ်းပြည်နယ် တောင်ကြီးမြို့၌ ကျင်းပခဲ့ပြီး လူထု ပညာပေးဟောပြောခြင်း၊ စုပေါင်း လမ်းလျှောက်ခြင်း တို့ကို ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
လေဖြတ်ရောဂါသည် မကူးစက်တတ်သော ရောဂါများအနက် ဒုတိယ အသေအပျောက် အများဆုံး ရောဂါ ဖြစ်သည်။ နှစ်စဉ် ကမ္ဘာ့လူဦးရေ ၁၅ သန်းခန့်မှာ လေဖြတ် ရောဂါကို ခံစားကြရပြီး ၎င်းတို့အနက် သုံးပုံတစ်ပုံမှာ အသက်အန္တရာယ်ဆုံးရှုံးနေကြရသည်။ အသက်အန္တရာယ် ဆုံးရှုံးသူများ၏ ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့်မှာ ဝင်ငွေနည်းပါးသည့် ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများမှ ဖြစ်ပါသည်။
သုတေသနတွေ့ရှိချက်များအရ ကမ္ဘာတစ်ဝန်း လေဖြတ်ရောဂါ ဖြစ်ပွားနှုန်းမှာ ပိုမိုမြင့်မားလာသည့် အတွက် ယခင်နှစ်များက လူ ခြောက်ဦးလျှင် တစ်ဦးသည် လေဖြတ်ရောဂါဖြစ်နိုင်သည်ဟုဆိုရာမှ ယခုနှစ်တွင် လူ လေးဦးလျှင် တစ်ဦးဖြစ်နိုင်သည်ဟု ကမ္ဘာ့လေဖြတ် ရောဂါကာကွယ်ရေးအဖွဲ့က ထုတ်ပြန်ထားပါသည်။
လေဖြတ်ရောဂါကုထုံးများ မည်သို့ပင် ခေတ်မီ တိုးတက်လာစေကာမူ လေဖြတ်ရောဂါခံ စားရသည့် လူနာ ဦးရေမှာ တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ် မြင့်မားလာသဖြင့် စိုးရိမ် စရာအခြေအနေ ဖြစ်လာပါသည်။
အခြားဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများနည်းတူ မြန်မာနိုင်ငံသည်လည်း လေဖြတ်ရောဂါဖြစ်ပွားနှုန်း များပြားလာသည့် နိုင်ငံ တစ်ခုဖြစ်နေပါသည်။ ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံများနှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများတွင် ကျန်းမာရေးအသုံးစရိတ် နည်းပါးခြင်း၊ လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ရှားပါးမှု၊ နည်းပညာ၊ စက်ပစ္စည်းကိရိယာမပြည့်စုံမှု စသည်ဖြင့် အဘက်ဘက်တွင် အားနည်းချက်များ၊ လိုအပ်ချက်များ ရှိနေသေးသဖြင့် လေဖြတ်ရောဂါ ကာကွယ်၊ ကုသရေး လုပ်ငန်းများကို ထိရောက်စွာ လုပ်ဆောင်ရာတွင် အခက် အခဲများစွာ ရှိနေပါသေးသည်။ သို့သော် မိမိတိုင်းပြည်၏ အခြေအနေ၊ အချိန်အခါပေါ်မူတည်၍ အားလုံးဝိုင်းဝန်း ကြိုးစားမှ သာလျှင် လေဖြတ်ရောဂါဖြစ်ပွားနှုန်း ကျဆင်းလာမည် ဖြစ်ပါသည်။
လေဖြတ်ရောဂါသည် အသက်အရွယ်ကြီးသောသူ များတွင် ပိုမိုဖြစ်ပွား လေ့ရှိသော်လည်း မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်စွာ နေထိုင်မှုနှင့် စားသောက်မှု အားနည်းသဖြင့် အသက်ငယ်ရွယ်သော သူများတွင် လေဖြတ်နှုန်း တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ် မြင့်မားလာသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ သုတေသနတွေ့ရှိချက်အရ ရန်ကုန်ပြည်သူ့ ဆေးရုံကြီးနှင့် ပုဂ္ဂလိက ဆေးရုံများသို့ ဆေးရုံတက်ရသော လေဖြတ်ရောဂါလူနာ၏ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းမှာ အသက် ၆၀ အောက် လူများဖြစ်နေသည်ကို ထိတ်လန့်ဖွယ်ရာ တွေ့ရှိရ ပါသည်။ တိုင်းပြည်၏အဓိက ကာယ၊ ဉာဏလုပ်အား အရင်း အမြစ်ဖြစ်သော လူငယ်၊ လူလတ်ပိုင်းများတွင် လေဖြတ်ရောဂါ ဖြစ်ပွားနှုန်း များလာခြင်းသည် တိုင်းပြည် ၏ တိုးတက်မှုကို ဟန့်တားစေနိုင်သည့် အဓိက အချက် တစ်ချက်ဖြစ်ကြောင်း သတိမူရမည်ဖြစ်ပါသည်။
လေဖြတ်ရောဂါသည် မဖြစ်ခင် ကြိုတင်ကာကွယ်၍ ရသော ရောဂါတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ မိမိကိုယ်တိုင် အသိ၊ သတိ ရှိစွာဖြင့် ကျန်းမာအောင် နေထိုင်စားသောက်လျှင် လေဖြတ် ရောဂါမဖြစ်အောင် ကာကွယ်နိုင်ပါသည်။
(၂) ဆီးချို၊ သွေးချိုရောဂါရှိခြင်း
(၄) နှလုံးခုန်မမှန်ခြင်း၊ နှလုံးရောဂါရှိခြင်း
(၆) ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း၊ ဆေးရွက်ကြီးသုံးစွဲခြင်း
(ဆေးရွက်ကြီးထည့်၍ ကွမ်းစားခြင်း၊ ဆေးရွက်ကြီး ငုံခြင်း)
(၈) ကျန်းမာရေးနှင့်မညီညွတ်သော အစားအစာကို စားသောက်ခြင်း
(၉) ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုနည်းခြင်း၊ အားကစား မလုပ်ခြင်း
ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းသည် နှလုံးရောဂါ၊ ကင်ဆာ ရောဂါနှင့် လေဖြတ်ခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်သည်ဟု လူအများ သိရှိကြသော်လည်း ဆေးရွက်ကြီးထည့်၍ ကွမ်းစားခြင်း သည်လည်း လေဖြတ်နိုင်သော အကြောင်းတစ်ခု ဖြစ်ကြောင်းကို သိရှိမှုနည်းပါးသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။
လူငယ်၊ လူလတ်ပိုင်းများတွင် လေဖြတ်ရခြင်း၏ အကြောင်းရင်းတစ်ခုမှာ ဆေးလိပ် သောက်ခြင်းနှင့် ဆေးရွက်ကြီးထည့်၍ ကွမ်းစားခြင်းတို့ကြောင့် ဖြစ်သည်။
ယခုအခါ တောရော မြို့ပါ ဆေးရွက်ကြီးထည့်၍ ကွမ်းစားကြသည့် လူကြီး၊ လူငယ် အရေအတွက် ပိုမိုများပြားလာသည်ကို တွေ့ရှိရသည့်အတွက် ဆေးရွက် ကြီးကြောင့် လေဖြတ်ခြင်းအန္တရာယ်ကို သိရှိကြစေရန် ရည်ရွယ်၍ ဤဆောင်းပါးကို ရေးရခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ (World Health Organization) က ဆေးရွက်ကြီး သုံးစွဲမှု အမျိုးအစားများကို အောက်ပါအတိုင်း သတ်မှတ်ထားပါသည်။
(၁) ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း (Smoked tobacco)
ဆေးပြင်းလိပ်၊ ဆေးရွက်ကြီးပါဝင်သော ဆေးပေါ့လိပ်နှင့် စီးကရက် စသည်တို့၏ မီးခိုး/အငွေ့ကို ရှူ၍ သုံးစွဲခြင်း။
(၂) ဆေးရွက်ကြီးစားသုံးခြင်း(Smokeless tobacco)
ဆေးရွက်ကြီးကို အမှုန့်ဖြစ်စေ၊ အရွက်လိုက် ဖြစ်စေ၊ အပိုင်းအစဖြစ်စေ ပါးစောင်တွင်ငုံ၍ လည်းကောင်း၊ ဝါး၍လည်းကောင်း၊ နှာခေါင်း တွင်ထည့်၍လည်းကောင်း သုံးစွဲခြင်း။
ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းကြောင့် ဆေးရွက်ကြီးတွင် ပါဝင်သော နီကိုတင်း၊ ကာဗွန် မိုနောက်ဆိုက်နှင့် ဓာတ်ပြု အငွေ့များသည် အဆုတ်မှတစ်ဆင့် သွေးထဲသို့ရောက်ရှိပြီး သွေးကြောနံရံများကို ပျက်စီးစေသဖြင့် လေဖြတ်ခြင်း အန္တရာယ်ကို ဖြစ်စေပါသည်။
ဆေးရွက်ကြီးငုံခြင်း၊ ဝါးခြင်းတို့ကြောင့် ဆေးရွက်ကြီးတွင် အဓိကပါဝင်သော နီကိုတင်းဓာတ်နှင့် အန္တရာယ်ရှိသော အခြားဓာတ်ပစ္စည်းများသည် ခံတွင်းနှင့် နှာခေါင်းအမြှေး လွှာ၊ အစာအိမ်နံရံမှတစ်ဆင့် သွေးကြောထဲရောက်ရှိပြီး သွေးပေါင်ချိန်မြင့်ခြင်း၊ နှလုံးခုန်နှုန်းမြန်ခြင်းတို့ကို ဖြစ်ပွား စေသည်သာမက ဦးနှောက်သွေးကြောများကို ကျုံ့စေခြင်း၊ ရေရှည်တွင် သွေးတိုးရောဂါဖြစ်လာခြင်း၊ ခန္ဓာကိုယ်တွင် ကောင်းသော အဆီဓာတ်များ ကိုနည်းစေ၍ မကောင်းသော အဆီဓာတ်များကိုများစေခြင်း၊ ဆီးချို၊ သွေးချို ဖြစ်ပွားစေ ခြင်းတို့ကိုဖြစ်စေပါသည်။ အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ ဆွီဒင်နှင့် အိန္ဒိယ စသည့်နိုင်ငံများတွင် ပြုလုပ်ထားသော သုတေသန များအရ ဆေးရွက်ကြီးစားသုံးခြင်းသည် လေဖြတ်ရောဂါကို ဖြစ်စေနိုင်သော အဓိကအကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရှိထားပါသည်။
▲ကမ္ဘာတစ်ဝန်း ဆေးရွက်ကြီးစားသုံးခြင်းအခြေအနေ ▲
ကမ္ဘာ့လူဦးရေ ၇ ဒသမ ၇ ဘီလီယံအနက် သန်း ၃၀၀ ခန့်မှာ ဆေးရွက်ကြီးစားသုံး သည်ကိုတွေ့ရပြီး ၎င်းတို့အနက် ၈၉ ရာခိုင်နှုန်းမှာ အာရှနိုင်ငံများဖြစ်သည့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်၊ မြန်မာနှင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံများတွင် နေထိုင်သူများ ဖြစ်ပါသည်။
အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် ဆေးရွက်ကြီးစားသုံးသူ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းရှိပြီး အမျိုးသားများနှင့် ကျေးလက်တွင် နေထိုင် သူများ ပိုမိုသုံးစွဲကြသည်ဟု ဆိုပါသည်။
ဆေးလိပ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက ဈေးနှုန်းချိုခြင်း၊ ကျန်းမာ ရေးဆိုးကျိုးရှိသည်ကို မသိရှိကြခြင်းနှင့် လူငယ် အချင်းချင်း အတုခိုးခြင်းတို့မှာ ဆေးရွက်ကြီးစားသုံးမှု များပြားလာ ခြင်း၏ အဓိကအကြောင်းရင်းများ ဖြစ်သည်ကို တွေ့ရှိရ ပါသည်
မြန်မာပြည်တွင် ဆေးရွက်ကြီးစားသုံးသူ မည်မျှ ရှိသည်ကို အတိအကျမသိသော်လည်း ပတ်ဝန်းကျင်၌ လူကြီး၊ လူငယ်မရွေး ဆေးရွက်ကြီးထည့်ပြီး ကွမ်းစားသူ အရေအတွက် များပြားလာသည်ဟုဆိုပါက လူတိုင်း လက်ခံကြလိမ့်မည်ထင်ပါသည်။
ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းနှင့် ဆေးရွက်ကြီး စားသုံး ခြင်းတို့ကို စနစ်တကျထိန်းချုပ်ရေးအတွက် အားလုံး ဝိုင်းဝန်းဆောင်ရွက်ကြရန် လိုအပ်ပါသည်။ ဒေသဆိုင်ရာ အုပ်ချုပ်သူအာဏာပိုင်များ၊ ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစား ဝန်ကြီးဌာန ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများနှင့် ပြည်သူများ ကိုယ်တိုင် မိမိလက်လှမ်းမီသလောက် ဆေးရွက်ကြီးသုံးစွဲမှု လျော့ကျအောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။
(က) ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနမှ ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်သည့် ဆေးရွက်ကြီးသုံးစွဲမှု လျှော့ချ ခြင်းလုပ်ငန်းများ
- ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၊ ပညာရေး ဝန်ကြီးဌာန တို့ပူးပေါင်း၍ မူလတန်းမှစ၍ တက္ကသိုလ်အထိ ဆေးရွက်ကြီး အန္တရာယ် ကို ကျောင်းသားလူငယ်များ သိရှိအောင် ပညာပေး သင်ခန်းစာ များကို သင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင် ထည့် သွင်းသင်ကြားပေးခြင်း၊ ဆရာ ဆရာမများ ၏ ကြီးကြပ်မှုဖြင့် ကျောင်း သားများကိုယ်တိုင် ဦးဆောင်၍ ဆေးလိပ်မသောက်ရေး၊ ဆေးရွက်ကြီး မသုံးစွဲရေး လှုပ်ရှားမှုများ လုပ်ဆောင်ခြင်း၊ တစ်ဦး တစ်ယောက်ချင်းမှတစ်ဆင့် မိမိပတ်ဝန်းကျင်မှ လူများပါဝင်လာအောင် စည်းရုံး လှုံ့ဆော်သည့် အလေ့အကျင့်များ ပျိုးထောင်ပေးခြင်း။
- လုပ်ငန်းခွင်တွင် အလျဉ်းသင့်သလို ဆေးရွက်ကြီး အန္တရာယ် ပညာပေးခြင်းများ လုပ်ဆောင်ခြင်း။
- အများနှင့်သက်ဆိုင်သောနေရာများ၊ ကျောင်းများ၊ တက္ကသိုလ်များတွင် ဆေးရွက်ကြီး ကင်းစင်သည့် ပတ်ဝန်းကျင် (tobacco – free - environment) ဖန်တီးပေးခြင်း၊ ဆေးလိပ်မသောက်ရသော နေရာများ (Smoke - free - zone) သတ်မှတ်သကဲ့သို့ ဆေးရွက်ကြီးစားသုံးမှု ကင်းစင်သည့်နေရာများ (Smokeless – tobacco - free - zone) သတ်မှတ်ခြင်း။
- ဆေးရွက်ကြီးသုံးစွဲသည့် အလေ့အထရှိသွားသူများကို ဆက်လက်သုံးစွဲခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်နိုင်ရန် တိုးတက်ပြီး နိုင်ငံများမှာကဲ့သို့ပင် ဆေးရွက်ကြီး နှင့် ဆေးလိပ်ဖြတ်ပေးသည့် အဖွဲ့အစည်းများ၊ အကူအညီပေးသည့် ဆက်သွယ်ရေးစနစ်များ (ဥပမာ - help lines, hot lines)တည်ထောင်ပေး၍ ကူညီခြင်း။
(ခ) ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများက လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်သော ဆေးရွက်ကြီး သုံးစွဲမှုလျှော့ချခြင်း လုပ်ငန်းများ
- ပြည်သူများနှင့် အမြဲထိတွေ့ခွင့်ရသော ကျန်းမာ ရေးဝန်ထမ်းများအနေဖြင့်လည်း မိမိပတ်ဝန်းကျင်၌ ထိတွေ့နေသော ဆေးရွက်ကြီး သုံးစွဲသူများနှင့် ၎င်းတို့၏ မိသားစုဝင်များကိုဆေးရွက်ကြီး အန္တရာယ်ပညာပေးခြင်းလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း။
(ဂ) မီဒီယာများက လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်သည့် ဆေးရွက်ကြီး သုံးစွဲမှုလျှော့ချခြင်း လုပ်ငန်းများ
- ဆက်သွယ်ရေးစနစ်များ လျန်မြန်စွာတိုးတက်နေသော ယနေ့ခေတ်တွင် မီဒီယာများ၏ စွမ်းဆောင် နိုင်မှု အခန်းကဏ္ဍသည် အလွန်အရေးကြီးလှ ပါသည်။
- ဆေးလိပ်နှင့် ဆေးရွက်ကြီးအန္တရာယ်များကို လူ အများသိရှိအောင် သတင်းစာ၊ ဂျာနယ်၊ စာစောင်၊ လူမှုကွန်ရက် (ဥပမာ-Facebook) နှင့် သတင်း ဌာနများမှတစ်ဆင့် ပညာပေး ဆောင်ပုဒ်များ၊ ဆောင်းပါးများကို အပတ်စဉ်၊ လစဉ်၊ အထိမ်း အမှတ် အခမ်းအနား နေ့များတွင် အလျဉ်းသင့် သလို ဖော်ပြပေးခြင်း။
- လူအများ စိတ်ဝင်စားမှုရအောင် ရုပ်ရှင်၊ ဂီတ၊ သဘင်နှင့် နာမည်ကျော် လူသိများသောပုဂ္ဂိုလ်များက ပညာပေးလုပ်ငန်းများတွင် ပါဝင် ဆွေးနွေးခြင်း၊ ဟောပြောပွဲများ၊ စကားဝိုင်းများ ကျင်းပပေးခြင်း။
(ဃ) တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်း လုပ်ဆောင်နိုင်သည့် ဆေးရွက်ကြီးသုံးစွဲမှုလျှော့ချခြင်း လုပ်ငန်းများ
- မိမိကိုယ်တိုင် ဆေးရွက်ကြီး၏ အန္တရာယ်များကို လေ့လာ၍ နားလည်သဘောပေါက်ပြီး ကိုယ်တိုင်လည်းမသုံးစွဲ၊ မိမိ၏အိမ်၊ မိမိ၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ လူများလည်း မသုံးစွဲစေရန် အသိပညာဖြန့်ဝေ ပေးခြင်း။
- ဆေးရွက်ကြီးသုံးစွဲသဖြင့် လေဖြတ်ရောဂါ၊ နှလုံးရောဂါ၊ ကင်ဆာ ရောဂါ တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခု ခံစားနေရသည့် မိသားစုဝင်ရှိသော သူများကလည်း မိမိကိုယ်တွေ့ကြုံရသောဒုက္ခများကို မိမိပတ်ဝန်း ကျင်မှ လူများကို သတိပေးခြင်း၊ ပညာပေးခြင်းတို့ကို လုပ်ဆောင် ခြင်း၊ လူထုလှုပ်ရှားမှုများတွင် ဦးဆောင်၍ တက်ကြွစွာပါဝင်ခြင်း။
ယခုနှစ် လေဖြတ်ရောဂါကာကွယ်နေ့ အထိမ်းအမှတ်ဆောင်ပုဒ်မှာ- “သင်လည်း တစ်ယောက်အပါအဝင် မဖြစ်ပါစေနှင့်” (Don’t Be The ONE)ဟု ဖြစ်ပါသည်။
တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းမှအစပြု၍ ကျန်းမာရေးနှင့် ညီညွတ်အောင် စားသောက် နေထိုင်ခြင်းဖြင့် လေဖြတ်ခြင်းမှ ကင်းဝေးနိုင်မည်ဖြစ်ကာ ကျန်းမာစွာဖြင့် မိမိအကျိုး၊ မိသားစုအကျိုး၊ နိုင်ငံ့အကျိုးကို ဆောင်ရွက်နိုင်ပြီး တိုင်းပြည်တိုးတက်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
နိဂုံးချုပ်အားဖြင့် လေဖြတ်ရောဂါကာကွယ်၊ ကုသ ရေးလုပ်ငန်းများတွင် လည်း အားလုံးပါဝင် ဆောင်ရွက်ကြ ပါရန် ဤဆောင်းပါးမှတစ်ဆင့် အလေးအနက် တိုက်တွန်းလိုက်ရပါသည်။
လူသားအားလုံး လေဖြတ်ရောဂါမှ ကင်းဝေးကြပါစေ။ ။
ဒေါက်တာစိမ်းမြမြအေး (ဦးနှောက်နှင့် အာရုံကြောရောဂါအထူးကုဆရာဝန်)
-World Stroke Organization, World health Organization, လေဖြတ်ရောဂါဆိုင်ရာ သုတေသနစာတမ်းများ။
May Hsiao 蕭 小 芳
My beloved Rohingya and Burmese people:
When i stepped forward, following the instructions of all our gods, God, Jesus Christ, God Allah, Buddhas （ Amitabha, Shakyamuni Buddha ） and Bodhisattvas, to deal with Burmese and Rohingya people’s affairs, my heart is filled with emotion.
Let me remind my dear ones sincerely:
i hope that the Myanmar government and the Burmese people and the Rohingya people should show your sincerity and hard work to resolve social disputes or conflicts, instead of creating racial problems or causing unnecessary casualties, and devote your efforts to the welfare of the peoples! Benefit the peoples! Let everyone be happy!
Cherish and respect human beings.
All people have the same rights, and no one is prohibited. Everyone is equally precious.
All people have love, benevolence, and kind hearts.
The people in the world must not fornicate, murder, steal, lie, be jealous, or resent, argue with each other violently.
Any man can only have one wife, cannot haveaconcubine; everyone delights in the chastity of women and men.
Let us repent of our sins sincerely. Persevere to the end.
With completely bright hope and confidence, work hard to move forward. Work in-person, support each other, help each other, and help the poor so that what we do can benefit our souls.
The old things are in the past, everything has become new.
Keep praying, and be grateful for everything. Mercy, humility, modesty, meekness, justice, purity, compassion, forgiveness, harmony, and perfection. Let’s encourage each other for the above.
i wrote this letter in accordance with the instructions of all our Gods, God, Jesus Christ, God Allah, Buddhas （ Amitabha, Shakyamuni Buddha ） and Bodhisattvas, and so on, with the great and divine powers of all our Gods, God, Jesus Christ, God Allah, Buddhas （ Amitabha, Shakyamuni Buddha ） and Bodhisattvas, etc! Having completed one of the entrustments of all our Gods, God, Jesus Christ, God Allah, Buddhas （ Amitabha, Shakyamuni Buddha ） and Bodhisattvas, etc, i am deeply touched and my heart is full of confidence.
According to the wills and entrustments of all our Gods, God, Jesus Christ, God Allah, buddhas （ Amitabha, Shakyamuni Buddha ） and bodhisattvas, etc. i have always hoped to solve the sufferings and problems of all human beings in the world. Let our universe world be better when we are existing.